CABDINUUR: Waxaan talo odaytinimo ku soo jeedinayaa in Nuune & Hayaan ay hogaanka jaaliyada ku wareejiyaan….” [WARAYSI] - Somnieuws.com
Isniin, 8 Febraayo [SOMNIEUWS] Cabdinuur Maxamuud wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii jaaliyada Soomaalida Zwolle & nawaaxigeeda [Zwolle en omgeving], isaga oo noqday Guddoomiyaha jaaliyadda, waxaanna uu xilka guddoomiyenimada uu jaaliyada ku wareejiyay qiyaastii muddo 10 sanno ka hor C/qaadir Cali Nuune.
2018-kii ayeey jaaliyadu 2 garab u kala jabtay, markii la isku mari waayay in la qabto doorashada guddoomiyaha jaaliyada, taas oo ay soo jeediyeen xubno ka tirsan guddigii jaaliyada ee xilligaas, halka qabsoomida doorashada ay ka biyo-dideen xubno uu ka mid ahaa Guddoomiyihii jaaliyada C/qaadir Nuune & 3 xubin oo kale.
Jaaliyadda ayaa wixii ka dambeeyey 2018 yeelatay 2 guddoomiye, taas oo dhaawac wayn u gaysatay wadajirkii & midnimadii jaaliyada ay muddo dheer ku soo caana-maaleysay.
Cabdinuur, oo horay ay u soo wada shaqeeyeen 2da guddoomiye ayaa ku tilmaamay nasiib darro & wax aan la qaadan karin in dad xil kasta ah oo wax bartay, aad na isu yaqaan oo xaafad qura wada dagan in ay ku kala qaybsamaan in hogaanka jaaliyada Soomaalida, oo marka la barbar dhigo jaaliyadaha kale tan ugu yar.
“Runti waan u soo joogay khilaafka, saaxiibadeey waanu soo wada shaqaynay waana dad aan qadarin wayn u hayo, waxaan ku kalsoonahay in qof kasta oo raggaas ka mid ah leeyahay karti [talent], waxaan anigu qabaa in labadoodu ba ay ka tanaasulaan xilka hogaaminta, loona dhiibo Cabbaas Cali Nuur oo ah shaqsi qof waliba ay garaneyso waddaniyadiisa & qiimaha uu bulshada ku dhex leeyahay, waana ogahay inuusan rabin, haddana in laga codsado inuu xilkaasi qabto ayaa codsanayaa si wadajirkii uu u soo laabto” Ayuu yiri Cabdinuur.
Dad badan oo reer Zwolle ah ayaa qaba aragtida ah; In Axmed Hayaan & guddigiisu ay ku fiican yihiin xiriirada meelaha Soomaalida laga caawin karo haddeey tahay gemeentiga iyo haddeey tahay hay’adaha kale, xittaa inuu soo celiyay xiriirkii Soomaalidu la lahayd ururada ay leeyihiin Turkida, Marookaanta & Surinaamta, kuwaas oo C/qaadir Nuune horay uu ugu fashilmay wada-shaqeyntooda; Halka sidoo kale C/qaadir Nuune aysan jirin cid ku gaari karta caawinta dadka & garab istaagooda. Dadka qaar waxay la tahay Nuune inuu kaga duwan yahay guddiga kale isaga oo waqti badan geliya inuu dadka caawiyo.